Nagu saabsan - Huaian Enyuan Products Tourist Co., Ltd.
Waxaan kuu abuurnay alaab qurux badan
Waxaan nahay Enyuan Travel Products Co., Ltd. Huaian City, Gobolka Jiangsu, Shiinaha. Waa shirkad ballaadhan oo ku takhasustay soo-saarka iyo iibinta alaabada daryeelka afka. Shirkadda waxaa la aasaasay 2017. Kadib in ka badan saddex sano oo shaqo adag iyo horumarin ah, waxay durba yeelatay xoog xoog leh. Hadda waxay leedahay koox wax soo saar xirfad iyo karti leh, badeecooyin kala duwanna waxaa loo dhoofiyaa dalalka dibedda. Waxay leedahay khibrad ganacsi shisheeye iyo maktabad wax soo saar. Waxyaabaha ay soo saarto shirkadda waxaa ka mid ah dhammaan burushka caday ee balaastigga ah, cadayga bamboolada, xoqida carrabka, burushyada dhexdooda, cadayga la tuuro, iwm.
Shirkaddu waxay daboolaysaa aag 5,000 mitir murabac ah, oo ka mid ah aagga dhismaha uu ka badan yahay 4,000 mitir murabac. Waxaa jira in kabadan 100 shaqaale. Shirkaddu waxay hadda leedahay 40 mashiinno wax soo saar oo loogu talagalay burushka caday. Soddon mashiinada wax soo saarka cadayga balaastik ah iyo xarumo taxane ah oo soo saarida amaanka la xiriira. Tiro khadadka wax soo saarka ayaa la sameeyay. Wax soo saarka maalin kasta ee cadayga wuxuu gaari karaa 200,000. Wax soo saarka sanadlaha ah ee cadayga dhammaaday wuxuu gaarayaa 50 milyan.
Laga soo bilaabo 2018, ka jawaabista mamnuucida balaastigga yurubiyanka, shirkadeena waxay hagaajisay jihada warshadaha gudaha shirkada waqtigeeda, iyadoo diirada saareysa buraashka cowska lagu sameeyo ee deegaanka u fiican. Shirkaddu waxay bilawday inay soo bandhigto khadka wax soo saarka cadayga ee caalamiga ah ee horumarsan, waxayna si joogto ah u cusbooneysiisaa mashiinka una hagaajisaa khadka wax soo saarka. Kaliya si loo soo saaro badeecooyin wanaagsan oo afka laga qaato. Labadii sano ee la soo dhaafay, shirkaddu waxay awood u yeelatay inay soo saarto in ka badan 40 nooc oo burushka cadayga ah iyo burushyada dhexdooda ah iyo waxyaabaha kale ee ilkaha ah. Badeecada waxaa loo iibgeeyaa adduunka dibadiisa waxayna ku guuleysteen amaan loo dhan yahay macaamiisha. Amarka sanadlaha ah ee cadayga bamboo wuxuu gaari karaa in ka badan 20 milyan.
Shirkaddu had iyo jeer waxay u hoggaansameysaa falsafadda ganacsiga ee "hal-abuurnimo macquul ah, tayada ugu horreysa". Waxaa ka go'an soo saarista cadayga ugu wanaagsan ee loogu adeego macaamiisha.
Waxaan kuu abuurnay alaab qurux badan!